Madheshvani : The voice of Madhesh - लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका पर्यटकको मुख्य गन्तव्य : मनमोहन चौधरी
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका पर्यटकको मुख्य गन्तव्य : मनमोहन चौधरी
मेयर, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, रूपन्देही
२०७६ साउन ३१ गते शुक्रबार 110 Shares
रूपन्देही जिल्ला सदरमुकाम भैरहवादेखि १८ कि.मी. मा अवस्थित लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका तीन वटा वडा दक्षिणी सीमा भारतसँग सीमा जोडिएका छन् । यस नगरपालिकाको केन्द्रमा शाक्यमुनि गौतम बुद्धको जन्मभूमी मायादेवी मन्दिर रहेको र बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र रहेको पावनस्थल रहेका कारण नगर क्षेत्रमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध धर्मावलम्बी एवं आन्तरिक एवम् बाह्य पर्यटकहरूको अत्याधिक आगमन हुने गरेको छ । यस नगरलाई पर्यटकीय नगरको रूपमा विकास गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू रहेका छन् ।
० लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा अहिले के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् ?
— लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका एकदम गाम्रीण एरिया हो । मैले यो नगरपालिकामा सडकलाई बढी महत्व दिएर काम गरिरहेको छु । यस नगरपालिकामा १३ वटा वडाहरू रहेका छन् । एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जान पनि समस्या रहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौं । शिक्षा क्षेत्रमा कर्मचारीको व्यापक अभाव रहेको छ । यहाँ सामुदायिक, नीजि र मदरसा गरी लगभग १३५ वटा विद्यालय रहेका छन् तर त्यहाँको निगरानी गर्र्ने १ जना मात्र कर्मचारी छन् ।
० विकास निर्माणको काममा के–कस्ता चुनौतीहरू झेल्नु परेको छ ?
— चुनौती त खासै छैन । गाउँ–गाउँमा बाटो फराकिलो गर्ने काम अगाडि बढिरहेको छ । त्यसबाट अहिले तत्काललाई केही असर हुनसक्छ । अन्य काममा हाम्रो जनताको समर्थन रहेका छन् ।
० नयाँ आर्थिक वर्षमा समृद्ध नगरपालिका निर्माणका लागि भावी योजनाहरू के–के तय गर्नुभएको छ ?
— हामीले हाम्रो नगरपालिकामा सुकन्या बीमा योजना लागू गरेका छौं । साउन महिनादेखि छोरी जन्मने प्रत्येक घरमा घरमुलीले पाँच हजार र २० हजार नगरपालिकाले गरी जम्मा २५ हजारमा छोरीको बीमा गरिन्छ । जब उसले विद्यालय तहको शिक्षा पूरा गरिसक्छे त्यसपछि त्यो पैसा उसलाई फिर्ता गर्ने भन्ने नियम हामीले नगरपालिका भित्र बनाएका छौं । यो योजनालाई सुकन्या नाम दिएका छौं । नगरपालिका भित्र फुसको घरलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै टिनको छानो लगाउन सुरू गरेका छौं ।
० २० वर्षभन्दा पहिले नै बिचैमा पढाई छोड्ने अथवा विवाह गरेर जाने भयो भने के गर्नुहुन्छ ?
— त्यस्तो अवस्था भयो भने नगरपालिकाले दिएको २० हजार हामीले फिर्ता लिन्छौं । अन्य रकम उसको आफ्नै हुन्छ । समाजमा देखिएका यस्ता विकृत्तिहरू हटाउनकै लागि हामीले सुकन्या बीमा योजना ल्याएका हौं ।
० तपाईहरूको काम गराईबाट जनता कतिको सन्तुष्ट छन् ?
— हाम्रो कामबाट जनता एकदम सन्तुष्ट छन् । हामीले जनताको आवश्यकताअनुसार नै काम गरिरहेका छौं ।
० स्थानीय निर्वाचनपश्चात् सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भन्ने गरिन्थ्यो, त्यहाँका जनताले सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा आएको महशुस गरेका छन् ?
— अहिले देश नयाँ संरचनामा गएको हुनाले केही समस्याहरू अझ यथावत् नै रहेका छन् । नयाँ संघीय संरचना भएकोले जनताले सिंहदरबार गाउँमा अझ पनि महसुस गर्न पाएका छैनन् । तर, जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू अवश्य पनि गाउँ–गाउँमा पुगेका छन् । यस नगरपालिकामा कर्मचारीको व्यापक अभाव रहेको छ । त्यसैले जनताको काम समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । यदि कर्मचारीको पदपूर्ति हुने हो भने यस नगरपालिकामा अन्य केही समस्या हुने छैन ।
० तपाइँको नगरपालिका र प्रदेश सरकारसँग कतिको सहकार्य हुन्छ ?
— हाम्रो नगरपालिका प्रदेश ५ अन्तर्गत पदर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध राम्रो छ । नियम कानुन बन्दैछ । यसले पुरा रूप लिइसकेपछि हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौं ।
० तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत तपाइँको नगरपालिकाले पाएको बजेट केमा खर्च गर्नुभयो ?
— हामीले त्यो बजेट सिँचाइका लागि खर्च ग¥यौं । केही बजेट बाँकी रहेको छ त्यो अब आउने बजेटमा मिसाएर फेरि सिँचाइकै लागि काम गर्ने योजना बनाएका छौं । कृषकलाई बीउ, मलखाद वितरण गर्ने पनि हाम्रो कार्यक्रम गरेको छ । अहिले मलखाद बजारमा खोजेजति उपलब्ध नहुँदा कृषकहरूलाई समस्या परिरहेको छ ।
० तपाइँको नगरपालिकामा पर्यटनका सम्भावनाहरू के–के छन् ?
— लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका भनेर हाम्रो नगरपालिकाको नाम नै रहेको छ । नामबाटै थाहा हुन्छ कि यो क्षेत्र पर्यटनका लागि प्रमुख गन्तव्य हो । तर, यहाँ पर्यटक आएर लामो समय बस्दैनन् । आएकै दिन फर्कछन् । यो यहाँको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ । सुविधायुक्त होटेल तथा लजको व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यतातिर ध्यान दिएर प्रत्येक वडामा एउटा पर्यटकीय स्थल विकास गर्ने मैले योजना बनाएको छु ।
० नगरपालिकामा घुम्नै पर्ने ठाउँहरू के–के छन् ?
— यहाँको प्रमुख पर्यटकीयस्थल मायादेवी मन्दिर हो । त्यसपछि भारत, श्रीलंका, चीन, कम्बोडिना, कोरिया लगायत अन्य राष्ट्रहरूले आफ्नै शैलीमा निर्माण गरेका मन्दिरहरू रहेका छन् भने अशोक स्तम्भको पनि आफ्नै ऐतिहासिक महत्व रहेको छ ।
० पर्यटकलाई केही दिन त्यही टिकाउनका लागि के–कस्ता योजनाहरू ल्याउनु भएको छ ?
— यो नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने वडा नम्बर १२ मा हामीले एउटा पार्क निर्माण गर्न सुरू गरेका छौं । १६ करोडको लगानीमा निर्माण हुने उक्त पार्कको डिपीआर निर्माण भइसकेको छ ।
० तपाइँले त्यहाँका जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउन केही सीपमूलक तालिमहरूको व्यवस्था गर्नुभएको छैन ?
— युवाहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाअन्तर्गत पनि कामहरू दिएका थियौं । उपभोक्ता समितिहरूद्वारा पनि विभिन्न कामहरू भइरहेका छन् । त्यसमा युवालाई नै प्राथमिकता दिएका छौं । महिलाहरूलाई सशक्तिकरण, सिलाई कटाई सम्बन्धी तालिमहरू दिइरहेका छौं । यस नगरपालिकामा पछिल्लो समयमा हामीले एउटा एम्बुलेन्स पनि संचालनमा ल्याएका छौं ।
० नगरपालिकाको विकासका लागि तपाइँको भावी योजनाहरू के–के रहेका छन् ?
— सुकन्या समृद्धि योजना, फुसको छाप्रोको घरलाई टिन लगाउने योजना, २४ सै घण्टा सरकारी अस्पताल संचालन गर्ने र इर्मजेन्सीको लागि १५ वटा बेड सुचारू ग्र्नका लागि पनि हामी काम गरिरहेका छौं ।